Daawo Sawiro: Madaxweynaha Jubbaland oo kulan xasaasi ah la qaatay Saraakiil Mareykan ah iyo amaro ka soo baxay. – wadankaaga.com
Home / Somali News / Daawo Sawiro: Madaxweynaha Jubbaland oo kulan xasaasi ah la qaatay Saraakiil Mareykan ah iyo amaro ka soo baxay.
Daawo Sawiro: Madaxweynaha Jubbaland oo kulan xasaasi ah la qaatay Saraakiil Mareykan ah iyo amaro ka soo baxay.
cowke August 4, 2017	Somali News Leave a comment 151 Views
Madaxweynaha Jubaland Mudane Axmed Max’ed Islaam ayaa guriga martida ee magaalada Kismaayo maanta kulan gaar ah kula qaatay madaxa howlgalka ciidamada Mareeykanka ee Afrika (AFRICOM) Gen. David J.Fumess.
Kulanka oo diiradda lagu saarayay howlgallo ka dhan ah Al-shabaab oo la filayo in dhawaan ay ka biloowdaan gobollada Jubooyinka ayaa waxaa sidoo kale qeyb ka ahaa madaxa ciidamada badda Mareeykanka u qaabilsan Soomaaliya iyo masuuliyiin ka socday howlgalka AMISOM.
Gobollada Jubooyinka iyo qeybo ka tirsan gobollada dalka waxaa ku sugan Ciidamo Mareeykan ah oo ay wehliyaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo ay iyagu tababarteen, kuwaa oo howlgallo qorsheeysan ka fuliya goobaha ay ku suganyihiin Al-shabaab islamarkaana beegsada madaxda Al-shabaab.
Madaxweynaha Jubaland ayaa Mareeykanka uga mahadceliyay taageerada ay siiyaan ciiidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada isagoo sheegay in uu aaminsanyahay in Shabaab laga xoreyn karo gobollada ay ku harsanyihiin hadii la isu kaashado arintaasi.
Madaxweynaha Axmed Madoobe ayaa sheegay in ay ka go’antahay sidii Shabaab looga xoreyn lahaa gobollada Jubooyinka balse waxa uu xusay in ay lagama maarmaan tahay kaalmo caalami ah oo arintaasi ku saabsan.
Ciidamada Jubaland, kuwa xoogga dalka iyo Ciidamo Mareeykan ah ayaa ku sugan deegaanka Buulogaduud oo qiyaastii 30 KM dhanka waqooyi kaga beegan Kismaayo, halkaa oo ay dhawaan ciidamo kala wareegeen Al-shabaab, waxaana deegaankaasi uu saldhig u yahay ciidamada isku dhafka ah ee u diyaarsan howlgallada ka dhan ah Shabaab ee la filayo in dhawaan ka biloowdaan gobollada Jubooyinka.
Previous Daawo Muuqaal aad la yaabi doonto: Webi leh Shan Midab ama Qaanso-roobaad iyo waxyaabo aad la yaabto !!!
Next Daawo Muuqaal: Heestii Saaxiib Sax – Deeqo Afro 2016